PressReader - Ilanga langeSonto: 2017-08-20 - Bazosukunyelwa abagwegwayo kwi-anc
Bazosukunyelwa abagwegwayo kwi-anc
Ithi amalunga awayeke ukuneka izindaba
Ilanga langeSonto - 2017-08-20 - Izindaba - ANDILE MOSHOESHOE
AZOQONDISWA izigwegwe futhi aphenywe amalunga enhlangano ebusayo uma eqhubeka nomkhuba wokweneka obala izinkinga zenhlangano eziphehla uqhekeko ezinkundleni zokuxhumana nasesidla ngala le n ingale kokuthi azikhulume nenhlangano kuqala.
Lokhu kushiwo ngunobhala weAfrican National Congress (ANC) esifundazweni sakwazulu-natal umnu Super Zuma engxoxweni ekhethekile NELANGA Langesonto emuva kwesigameko esishiye abaningi bekhungathekile kukhongolose esifundeni ilower South Coast eningizimu nesifundazwe ikwazulu Natal lapho kuthiwa kunelunga lale nhlangano elibhale enkundleni yezokuxhumana ukuthi liyabazi abantu ababulala lowo owayengunobhala WE-ANCYL kulesiya sifunda umnu Wandile Mkhize futhi bangaphakathi enhlanganweni.
Umnu Mkhize wadutshulwa wabulawa endlini yakhe emargate ngonyaka wezi-2012 ngabantu abangaziwa nalapho kwaboshwa umuntu oyedwa waphinde wadedelwa ngenxa yokungabibikho kobufakazi obubambekayo.
Umnu Zuma ukhuluma lokhu nje nobuholi BE-ANC kulesiya sifunda ilower South Coast bebusanda kukhipha isexwayiso bunxenxa amalunga ayo ukuba ahlukane nokubhala izinkinga zenhlangano ezinkundleni zokuxhumana kepha akaxhumane namaphoyisa kumbe izinhlaka zezomthetho uma eshiswa izinto azaziyo ngaphakathi kuwo.
Umnu Zuma uthe izinkulumo ezifuze lezi kazakhi enhlanganweni ziyachitha ziphinde zihlukumeze nemindeni ethintekayo.
"Lokhu sizokuphenya kuthi labo abathintekayo sibayise ekomidini lokuqondisa izigwegwe ngoba kuphambene nezinhlelo esinazo siyinhlangano zokubuyisana enhlanganweni," kusho umnu Zuma. Uthe indaba yezinkundla zokuxhumana ngeke isaba yinto ekhulu- nywayo kepha amalunga aqhubekayo nokubhala izindaba zeqembu azothathelwa izinyathelo ezinqala.
"Ukuthatha kwethu amandla ezifundeni ezine kulesi sifundazwe kungenye yezindlela zokuzama ukubuyisana njengoba sinqume ukuthi singenelele ezifundeni lapho kungekho khona ukuthula," kusho umnu Zuma. Izifundazwe eziphucwe amandla epolitiki esaseharry Gwala, Far North, Lower South Coast kanye nesaseMalahleni esihlakaziwe.
ILANGA Langesonto lingakudalula ukuthi udaba luka Mkhize selususe uhlevane esifundeni saselower South Coast njengoba selufinyelele nasemndenini kamufi ongaphathekile neze kahle yilesi senzo esenziwe yilunga eliqavile likakhongolose igama lalo eligodliwe okwamanje.
Unobhala WE-ANC elower South Coast umnu Mzwandile Mkhwanazi uthe kubuhlungu ukuthi abantu uma befuna izikhundla ngaphakathi enhlanganweni basebenzise amagama abantu abangasekho kodwa bebe bewazi kahle umthetho ukuthi uthini kumuntu onobufakazi ngento ayikhulumayo.
"Sisasho sithi lo obhale lento akaye emaphoyiseni nobufakazi," kusho umnu Mkhwanazi. Uthe usola ukuthi lokhu yimikhuba abantu abayenza ngamabomu ngoba sekusondele ingqungquthela, bafuna ukungcolisa amagama abantu abathile. Uphinde wadlulisa amazwi enduduzo emndenini kamufi umnu Ntokozo Maphumulo owayeyikhansela odutshulwe kwakhe ngeledlule.